Zhonghe Paper Manangana ny tranonkala farany, manamafy ny kalitao sy ny serivisinay
Fengcheng Zhonghe Paper Products dia mirehareha manome vokatra kalitao isan-karazany hamaly ny filanao. Ny vokatra sy serivisinay dia ao anatin'izany ny fonony, ny tavy vita amin'ny taratasy, ny lamba famaohana taratasy, ny servieta vita amin'ny taratasy, ny dispenser-taratasy, ny taratasy fidiovana sy ny fitaovantsika fitehirizana. Isan-karazany toy ny tsena mankany ...Hamaky bebe kokoa »
Angony ny tanjaky ny ekipa ary hamelana ny fahatanorana sy ny fahatanorana - fiofanana mivoaka ivelany 2020
Ao an-tanàna be tabataba Isan'andro ao an-trano sy any am-piasana dia mankaleo ny fiainana miasa. Andao, vaovao ny rivotra fararano. Andao hivoaka any ivelany, ampio mahafinaritra ny fiainana. Nandritra ity fanitarana ity dia nilalao kilalao ekipa maro isan-karazany izahay, fa ny tena nampiaiky volana dia ny lalao «olona manaitaitra ...Hamaky bebe kokoa »